कोरोना भाइरसको खोपमा सफलता मिलेको चीनको दावी !! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Corona (COVID-19) Updates/कोरोना भाइरसको खोपमा सफलता मिलेको चीनको दावी !!
काठमाडौं – कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को खोपमा सफलता मिलेको चीनले दावी गरेको छ । कोरोना भाइरसको खोप लगाइएका चिनियाँ स्वयम सेवकहरुको पहिलो टोली स्वस्थ भएसँगै खोपमा सफलता मिलेको उसले दावी गरेको हो । खोप लगाएपछि १४ दिने क्वारे`न्टाइनको बसा`ईंमा उनीहरु सबै स्वस्थ रहेको डेलीमेलले जनाएको छ।
उहानमा गरिएको उक्त पहिलो परीक्षणमा भाग लिएका १४ जना स्वयमसेवक फिर्ता भएका हुन् यद्यपि उनीहरुलाई अरु ६ महिना निगरानीमा राखिने बताइएको छ ।उक्त अवधिमा उनीहरुको रगतको नमूना लिएर एन्टी`बडिजई सुष्म अनुसन्धान गरिनेछ। शुक्रबारसम्म १०८ जना स्वय्मसेवकहरुमध्ये १ जनाको सबै स्वास्थ्य परीक्षण ठीक रहेको जनाइएको छ ।
काभ्रे – धुलिखेल अस्पतालमा आजदेखि कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको परीक्षण सेवा शुरू भएको छ ।
पहिलो चरणमा साताको दुई दिनमात्रै कोरोना सङ्क्र`मणको परीक्षण गरिने अस्पतालले जनाएको छ । सङ्क्र`मणको अवस्था अनुकूल परीक्षणको अवधि थपिने अस्पतालका चिकित्सक डा. राजेन्द्र कोजूले बताए ।‘पर्याप्त पीपीइ परीक्षण किटलगायतका परीक्षण सामग्री व्यवस्थापन गर्दै जाने भएकाले हाललाई हप्ताको दुई दिनमात्रै परीक्षणको समयावधि तोकिएको हो,’ उनले भने ।वाग्मती प्रदेश सरकारले कोरोना सङ्क्रमण परीक्षण तथा उपचारका लागि अस्पताललाई धुलिखेल नगरपालिकामार्फत २० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो ।
प्रदेशस्थित सामाजिक विकास मन्त्रालयले उक्त रकम नगरपालिकाको खातामा पठाइसकेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख डा नरेन्द्र झाले बताए । झाका अनुसार धुलिखेल अस्पतामा कोरोना सङ्क्र`मणको परीक्षण शुरु भएपछि छिमेकी जिल्ला सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली तथा भक्तपुरका केही नागरिकलाई सहज भएको छ । यसअघि राजधानी तथा आसपासका जिल्लाका नागरिकको काठमाडौँको टेकू`स्थित शुक्र`राज स`रुवा रोग अस्पतालमा परीक्षण गरिँदै आइएको थियो ।
कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिनको उत्पादन सुरु, ७ वटा कम्पनीबाट उत्पादन हुँदै